ShweMinThar: မြို့ပတ်ပြီး အလှပြင်မယ်
အသက်က (၃၀)၀န်းကျင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကာ မျက်နှာအသားအရေလေးတွေတင်းရင်းနေမှုကိုလျော့ကျမသွားအောင် မျက်စိ ထောင့်စွန်းက ကျီးခြေရာတွေပိုမဆိုးအောင် မြို့ပါတ်ပြီးဆေးခန်းရှာမယ်။ခန္ဓာကိုယ်တင်းရင်းဖို့ကတော့ Gym သွားပြီး အားကစား နဲ့ထိန်းသိမ်းရတာပေါ့နော် ဟီး ဟီး။အရင်ဆုံး ဆေးခန်းဖွင့်သက်တမ်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ Laser Face ကိုသွားကြည့်မိပါတယ် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များနှင့် ဦးစီးတယ် ကိုရီးယားနည်းပညာ/လေဆာနည်းပညာတွေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တဲ့အထိဝန်ဆောင်မှုကပေးပါတယ်။ မှဲ့ မှဲ့ခြောက်အစက်အပြောက် မွေးရာပါအမှတ်တွေဖျက်ခြင်း၊ တင်းတိပ် ၀က်ခြံအဖုအကြိတ်အမျိုးမျိုး ဆေးမင်ကြောင်များဖျက် မျက်နှာ ပေါ်ရှိ သွေးကြောမျှင်များ အကြောပြတ်ခြင်းများကိုကုသပေးနိုင်၊ ၀က်ခြံချိုင့်ခွက်များကုသခြင်းတွေ မျက်နှာနှင့် ကိုယ်ပေါ်ရှိ အမွှေးအမျှင်တွေကို အပြီးအပိုင်ဖယ်ရှားပေးခြင်းတွေလည်းလုပ်ပေးသတဲ့။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခွဲစိတ်ရန်မလိုဘဲမျက်နှာအရေပြားတင်းခြင်းကို Laser Genesis (USA) လေဆာဖြင့် မျက်နှာအရေပြားတင်းခြင်းချွေးပေါက်ကျဉ်းခြင်း အရေပြားနုပျိုအောင်ကုသခြင်းတွေကို တော် တော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေ ခန္ဓာကိုယ်မှမလိုအပ်သည့်အဆီတွေကို မိနစ်(၃၀)အတွင်း ဖယ်ရှားပေးတဲ့Liposuction (အဆီစုပ်ထုတ်ခြင်း) ကိုလည်းကုသပေးနေတယ်။ အင်း အဆီချပြီး အရေပြားလျော့မနေဘဲတင်းနေတာကိုသာခံစားရစေမယ့် လေဆာဖြင့်အဆီစုဝေးနေမှုကို အမြန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ CoolLipo (Laser နည်းပညာဖြင့် အဆီချခြင်း) ကိုလည်းလုပ်ပေးတယ်။ အိုပြောရရင် အများကြီးပဲ….Cosmetic Surgery (Plastic Surgery) ကို ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့် ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင်သေသပ်လှပသောလက်ရာ သင့်တင့်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးတာ အောင်မလေး…မောပါ့။
နောက်တစ်ခါ ထိုင်းမှာလုပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတိုင်းပဲ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဆေးခန်းလေးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါ တယ်။ ဒီဆေးခန်းမှာအားသာတာက ကိုယ်ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးကိုလိုချင်တယ်ဘယ်လိုကုထုံးနဲ့သင့်တော်တယ် ဘယ်လိုဈေးနှုန်းနဲ့ ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို အခမဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှကုသနိုင်တာပါပဲ။ Dr.Face ပါတဲ့။ လေဆာဖေ့မှာပြောပြခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလိုမျိုး ဒီဆေးခန်းမှာလည်းအတော်များများရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီမှာက အရေးအကြောင်းပျောက် Botox ထိုးခြင်း၊Collagen ဖြည့်ခြင်း၊ မခွဲမစိတ်ရဘဲ နှာတံဖော်ခြင်း၊နှာထိပ်ချွန်ခြင်း မျက်နှာပြင်ပိုမိုပြည့်ဖောင်းအောင်ပြုပြင်ခြင်းများ၊မျက်နှာဖောင်းကားနေသူများ V-Shape သွယ်လျအောင်ပြုပြင်ခြင်းများကို ကုသပေးနေတာကအပိုဆောင်းပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ခွဲသုံးခုလောက် မန္တလေး မြိတ် မကွေးမြို့များ မှာပါ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဦးစီးပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါ။ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွင့်ထားတာဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့Skin Lifting and Anti-aging Face ကုသမှုမျိုးကိုအသက် ၂၅နှစ်မှ ၃၀နှစ်အတွင်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေက သုံးလလျှင်တစ်ကြိမ် ကုသမှုခံယူသင့်ပြီးအသက် ၃၀နှင့်အထက်များသည် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ကုသမှုခံယူသင့်သည်ဟုပြောပါသဗျာ။
“အသက်အရွယ်ကြောင့် မျက်နှာတင်မက လက်များတွင်ပါ အရေးအကြောင်းများကြောင့်လက်စွပ်အလှမပေါ်လွင်လို့ စိတ် ညစ်နေ ပါသလား? သတင်းကောင်းပါးလိုပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်IPL/RF စက်သစ်ကြီးဖြင့် မျက်နှာနှင့် လက်ပါမကျန် အရေးအကြောင်းကင်းပြီး နုပျိုတင်းရင်းသွားစေရန်အချိန်တိုအတွင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ” အဲ့ကြေငြာလေးတွေတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားမိပြန်ပါတယ်။အဲဒီဆေးခန်း က IPL စက်ကြီးဖြင့် အရေပြားပြန်လည်သစ်လွင်စေခြင်း၊ အမွှေးအမျှင်များဖယ်ရှားခြင်း၊- ဂျိုင်း - နှုတ်ခမ်းမွှေး - ပါးသိုင်းမွှေး - ခြေသလုံး မွှေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားအမွှေးအမျှင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုလဲ?
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလုပ်မယ်လုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ် လခထုတ်ရင်ပေါ့ လေ ဟဲဟဲ။ ဆေးခန်းလိပ်စာလေးတွေပြောပြဖို့မေ့နေတယ်…ကဲလာပြီ
(၁)Laser Face (မျက်နှာအရေပြားနှင့် ခွဲစိတ် အထူးကုလေဆာဆေးခန်း)
ဆေးခန်းဖွင့်ချိန် - နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီမှ (၅)နာရီအထိ ‘တနင်္လာနေ့တိုင်းဆေးခန်းပိတ်သည်’၁၆(က)၊အင်းလျားရိပ်သာ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကုန်။ ဖုန်း - ၀၁ ၆၆၄၉၇၂၊၆၅၃၄၂၅
(၂)Dr.Face ဆိုင်ခွဲ အမှတ်-၅အေ၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းခြံလမ်းနှင့် စမ်းချောင်းလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်
ရန်ကုန်အခန်း၅/C, Race Course ကွန်ဒို၊တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ YKKO ကြေးအိုးအပေါ်ထပ်၊ တာမွေ၊ဖုန်း- 09-5202781
မန္တလေးအမှတ် (၁၂၀)၊၂၇လမ်း၊ ၇၆ x ၇၇လမ်းကြား၊ Royal City Hotel ဘေး၊ ဖုန်း - ၀၂-၆၄၆၀၉၊၀၉-၄၃၀၂၂၆၅၄
(၃)KEMBANGAN – RADIANT
MEDICAL& AESTHETIC CENTRE
အမှတ် (၃၆၅/၃၆၇) ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း(အထက်)၊IHBC ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၃၈၉၈၂၄၊၃၉၂၄၈၄၊ ၀၉-၈၀၃၀၁၆၆ ဖက်(စ်) - ၃၉၂၅၉၀
Posted by Alex Aung at 8:12 PM